Taliye ku-xigeenkii nabad-sugidda oo ka hadlay sababta uu xilka iskaga casilay (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Taliye ku-xigeenkii nabad-sugidda oo ka hadlay sababta uu xilka iskaga casilay (DHAGEYSO)
Taliye ku-xigeenkii dhinaca howlgallada hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA C/salaan Yuusuf Guuleed “Daljir” ayaa markii ugu horeeysay ka hadlay sababta rasmiga ah ee uu xilka iskaga casilay.
C/salaan Yuusuf Guuleed “Daljir” ayaa dhawaan warqada is-casilaadiisa u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo, kadib markii uu muddo 4 sano ah xilka haayay.
C/salaan Daljir oo wareeysi siiyay idaacadda VOA-da laanteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay in sababta uu xilka iskaga casilay ay keentay arrimo fara badan oo ku xeeran hay’adda amniga iyo hab dhaqanka madaxda dowladda federaalka Soomaaliya.
Wuxuu C/salaan Daljir sheegay in madaxda dalka ay ka gaabiyeen inay is-bedel ku sameeyaan hay’adda amniga iyagoo ka hortagaya musuq-maasuqa baahsan iyo ku takrifal awoodeed oo ka dhex-taagan hay’adda.
“Walaal sababta aan isku casilay waxay tahay musuq-maasuq baahsan iyo ku takrifal awoodeed ee ka dhex taagan hay’addaha amniga, muddo 4 sano ayaan xilkaan haayay, anigu wax mushaar ah ma qaadan, waxaan madaxweynaha iyo ra’iisul wasaaraha usoo jeedinayaa inay arrintaas dib u eegis ku sameeyaan” Sidaas waxaa yiri C/salaan Daljir